सत्ता तानातान – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:३८ मा प्रकाशित
करनालीयाँ एमाले खलक माओवादीको सत्ता तानातानले एक दुई दिन त सामाजिक सञ्जालवालालाई निकै मजा आथ्यो होला । तर के गर्नु बुद्धि नभा पलाँटाहरले खेल विगारेछी, न त सञ्जालवालालाई मजा आयो न त खेलाँ सामेल भालाई मजा आयो । विचरा कसैको त अविश्वासको प्रस्ताबाँ सही गरेकै कारणले छँदाखाँदा पद र भत्ता अनि गाडी नै जाने भो । राँगा लडाइँ, पाडा मिचाइ भन्या यै त होला । मुद्दा मामिला खेलाँ करनालीकालाई पछि पार्ने खेलाँ पाल्पाली, स्याङ्जाली, ह्याङ्गजाली र झापालीले त सक्दैनन् भने अरुका के कुरा भन्ने आहानलाई यो चोटिनी करनालीकाले जोगाएरै राखे ।
खोला र खुर्सानीलाई मुद्दादेर नाम कमा करनालीकाले आँफूविरुद्ध आ बललाई यसरी फर्काई देकी विचरा सुट गर्ने मान्छेनै फुर्लुङ्ग पल्टिन पुगे । हुन पनि कति जान्या हुनके संसदीय दलाँ छिनोफानो गर्ने प्रमुख सचेतकलाई नै किक गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले जसरी पासा पल्टाए यसले विचरा मुख्यमन्त्री हुने दाउले अविश्वाश प्रस्ताब ल्या मान्छेलेसमेत अब के हुँदैछ भन्ने बुझेनन् । लास्टाँ मुख्यमन्त्रीका प्रत्यासी नाफा घाटा केई नवेहोरेर उम्किने भए भने विचरा मुख्य सचेतक मात्रै खाल्टाँ भास्सिए ।
त्यसो त लडाइँका पक्ष विपक्षलाई हाई कमाण्डले राजधानी बोलाछन् भन्ने सुनिन्छ । राम्रै सल्ला देर पठाउने हुनकी झ्याँको झारेर पठाउने हुन् ऐल्यै अड्कल काटन सक्किया छैन । तर नेताहरले सत्ताँ बस्नेहरले जन्ता निम्ति के के काम गर्यौ र के कति विकास भो अनि भष्टाचार कत्तिको गर्याछौ । भष्टाचारको लिष्टाँ तिमरको नाम त अग्रपंतियाँ छ त भनेर सोधे भने नेताले जवाफ के दिने हुन् त्यो चाइँ अल्ली डेन्जर छ । अन्था खासै केई छैन । त्यसो त भष्टाचार गर्या रकम मुख्यमन्त्रीले ठाउँमानी दिने गरेकै त होलान् ।
कत्ति नदेभा भष्टाचारको विषयाँ यत्ति धेरै कुरा चल्याछ यस्तो बेलाँ दुईटै नेता किन चुप लाएर बस्या छन् त ? त्यसो त नेताहरलाई यसो फ्रेस हुने मौका दिम्न त भनेर बोला नि हुन सक्छ । त्यसैले राजधानी बोला विषयाँ धेरै अन्टसन्ट नसोचम्है साथी हो । बरु अब आउने महाधिवेशन र चुनाबाँ कर्नालीलाई कसरी वगाउने हो ? आपसाँ झगडा नगरेर अब विकास भनेर मरिहत्ते गर्ने हैन विकासका कुरा धेरै गरियो । यो नेपालाँ जति गरेनी केइ लछारपाटो लाग्ने हैन । त्यसैले अब महाधिवेशन गर्ने र चुनावको तयारी गर्नेतिर लागम । यसका लागि लडेर हैन मिलेर जानूपर्छ भन्ना लागि नै नेताहरले बोला हुन सक्छन् ।
त्यसैले गरुंगो मनलेर हैन हलुंगो मनलेर जानोस नेताजिहरु । राजनीतियाँ कैले नसोच्या हुन्छ । कैले सोच्यानी हुन्न । त्यसैले पाटी एकभो र चुनाउ जित्यो भनेत यो मोरो मुख्यमन्त्रीको पद त घराँ बसिबसि आउँछ हैनर ? कमरेडहरु । शोकलाई शक्तिमा बदलौँ । झोकलाई शान्तिमा बदलौँ । प्रदेश बनाउनु त त्यस्तै हो, आँफू बनौँ । आफ्नालाई बनाउँ । नेपाली राजनीतियाँ यति गर्न सकेछि फेल बनाउने हिम्मत कसैको हुन्न । जयहोस् करनालिका नेताजीहरु ।